NYI LYNN SECK 18+ DEN: Updated News about Myanmar Lexicon and Corpus
Update သတင်းလေးပါဗျာ။ ကျွန်တှော အရင်ပိုစ့်မှာ ရေးခဲ့သလို Myanmar Corpus တွေ Lexicon Database တွေက မရှိဘူး ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ Little Knowledge လေးနဲ့ မသိတာတွေကို လျှောက်မရေးပါနဲ့၊ ခင်ဗျားဘလော့ဂ်ကို ဖတ်ပြီး အားလုံးအမှားကို အမှန်ထင်ကုန်မယ်၊ မသိဘဲနဲ့ လျှောက်မပြောနဲ့လို့ တာဝန်ရှိသူဟု ထင်ရသူ တစ်ယောက်က ဆိုလာလို့ ဒါလေးကို ထည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါတွေ လုပ်ပြီးသား ရှိပါတယ်တဲ့ခင်ဗျား။ ဘယ်သူတွေ လုပ်နေမှန်းမသိ၊ ဘယ်အဆင့် ရောက်နေပြီမှန်းလဲ မသိ၊ အခမဲ့ (သို့) ငွေကြေးနဲ့ ပေးသုံးမယ် မသုံးဘူးဆိုတာလည်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်းလည်း မရှိ၊ ဘယ်သူ့ကို မေးရမှန်းလဲ မသိဘဲနဲ့ အပြင်က ကျွန်တှောတို့လို့ Cheese Brain တွေက ဘယ်လိုလုပ် သိပါ့မလဲခင်ဗျာ။ ဒါနဲ့ တီတီတာတာ လိုက်ရှာလိုက်တော့ နိုင်ငံခြားက ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ ဒီလို သွားတွေ့တယ်။ ဒန်တန့်တန်
Myanmar (MCF, Yangon) on Dec 22, 2006
Myanmar has kicked off Myanmar National Language Implementation (MNLI) project in the early of 2006. The project is run under the Ministry Communication, Post and Telegraph.
It is composed of4groups as followings:-
1. Machine Translation and Recognition, lead by Deputy Minister of Science and Technology - University of Computer Study, Yangon
2. Myanmar Lexicon, lead by Deputy Minister of Education
3. NLP Standards and Application, lead by MCF (Myanmar Computer Federation, U Thein Oo) - MMUNLP (Myanmar Unicode and NLP), NLP group, MCF
4. Coordination, lead by Vice president of e-national task force - Myint Myint Than (secretary)
Currently there are7members in NLP group in MCF. It shew its progress in lexicon development. Currently, it contains 27,000 entries of Myanmar-English coded in the format of Lexique Pro of SIL. The lexicon is designed for human use. It contains several fields such as POS, classifier, sample sentence, synonym, antonym, etc. The NLP Standards and Application group also support MMUNLP group in several activities such as correcting Unicode encoding for Myanmar. MT and Recognition group explained their progress in developing Myanmar to English MT. It isarule based approach to implementasyntactic transfer MT. Currently there are 400 words. There are5members in the group. Myanmar grammar is very similar to Japanese grammar in terms of word order (SOV) and apparent use of grammatical case. It should be very helpful if they haveachance to learn from Japanese experience in developing MT. MCF has shown their interest in participating in ADD-2.
ကျွန်တှောက အဆိုပါ Lexicon မှာ မြန်မာ-အဂဿငလိပ် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တှော လိုချင်တာက အဂဿငလိပ်-မြန်မာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတော့ ဒီ Lexicon ဟာ အဂဿငလိပ်-မြန်မာကိုလည်း သုံးလို့ရကြောင်း ပြောပြပါတယ်ခင်ဗျ။ မှန်တာ ပြောရရင် အဂဿငလိပ်-မြန်မာနဲ့ မြန်မာ-အဂဿငလိပ် မတူဘူးလို့ ကျွန်တှော ယုံကြည်ပါတယ်။ အဲ Bilingual လုပ်ထားရင်တော့ နဲနဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အထက်က စာပိုဒ်မှာ The Lexicon is design for human use လို့ပါနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ Human Use နဲ့ Machine Use လည်း မတူဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဆိုတော့ကာ တကယ်ရှိတယ် ဆိုရင်တော့ ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ဗျာ။ ဘာကြေငြာချက်မှ မထုတ်တော့လည်း မရှိဘူးလို့ ထင်မိတာ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကို မေးရမှန်း မသိတာကလည်း ပြသနာ တစ်ခုပေါ့ဗျာ။ ဪ ကျန်သေးတယ်။ နေရှင်နယ် ကှောပက်(စ်) ကလည်း ရှိပါသတဲ့။ ဘလောဂ့်ထဲက စာတွေလည်း ပါဝင်ပါသတဲ့။ ကျွန်တှော့ ဘလော့ဂ်က စာတွေများ ပါနေဦးမလားတော့ မသိဘူး။ ဒါဆိုရင်တော့ စတိုင်လ်လုပ်ပြီး ကန့်ကွက်ရမလားဘဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တှောလည်း မြန်မာပီပီ အလကား မပေးချင်လို့ပါ။ ကှောပက်(စ်)မှာ သုံးမယ်ဆို ရောင်းမယ်။ မဂဿဂဇင်း တွေမှာလိုပေါ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ၅၀၀၀၊ ကဗျာတစ်ပုဒ် ၂၅၀၀။ ကျွန်တှော့ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ယူသုံးရင်….။ ဟဲဟဲ
ရှင်းရှင်း ပြောရရင်တော့ ကျွန်တှောက အသုံးချချင်သူ။ Resource ဆိုတာ များများရလေ ကောင်းလေ။ အလကားရလေ ကောင်းလေပဲ။ ကျွန်တှော့ ဘလော့ဂ်မှာ ဟိုဟာ မရေးနဲ့ ဒီဟာမရေးနဲ့လို့တော့ မတားကြနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တှော ကိုယ်၌ကလည်း စောင့်စည်းသင့်တာ စောင့်စည်းပြီး ရေးပါတယ်။ ကျွန်တှော အခါခါ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တှောက ဘာကောင်မှလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဆရာကြီး လိုက်လုပ်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အမြင်မှား အတွေးမှားတာတွေလည်း ရှိမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မြင်တာ ကိုယ်တွေးတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ရေးထားတာပါ။ မှားနေရင် စကားကို ချိုချိုသာသာပြောပြီး ပြင်ပေးလို့ ရပါတယ်။ အမှားကို ဝန်ခံပြီး အမှန် ပြင်ပါမယ်။ ကျေးဇူးတင်စရာ ရှိရင်လည်း ဝန်မလေးပါဘူး။ ကျေးဇူးစကား ဆိုပါမယ်။ ပုဂဿဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်လိုရင်း လုံးဝ မရှိပါဘူး။ အိုင်တီနယ်ထဲက ဆရာကြီးများ အကြောင်းကိုလည်း ဂဃနဏ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော့ကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း နှိမ်နှိမ်ချချ ပြောရင်တော့ ဘာကောင်ကြီး ဖြစ်နေပါစေ ကျွန်တှော မကြိုက်ဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း ကြိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ လူအချင်းချင်း လေးစားမှု ရှိရပါမယ်။ ဒီတော့ ပြေပြေလည်လည် ထောက်ပြဝေဘန်ပါ။ ကျွန်တှောက မှားနေရင် ပြေပြေလည်လည် တောင်းပန်လိုက်မယ်။ ပြီးရောပေါ့။ ပိုစ့်တွေရဲ့အောက်မှာ ကွန်မန့်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ပြောပြပေးပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် စောက်ရူးရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်ဆိုပြီး လာမဖတ်ဘဲ နေချင်လည်း နေလိုက်ပေါ့။ ကျွန်တှောက “လာပါလာပါ မကြည်ရဲ့” လို့ မခှေါပါဘူး။
ကျွန်တှောဟာ End-User တစ်ယောက်။ အကောင်းဆုံးကို သုံးချင်တယ်။ ရနိုင်တဲ့ Resource မှန်သမျှ လိုချင်တယ်။ ဆိုတော့ကာ ဒါတွေ တကယ်ထွက်လာမယ်၊ ပြည်သူလူထုကိုလည်း ပေးသုံးမယ် (ငွေကြေးနဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် အခမဲ့)၊ စနစ်လည်း ကျမယ်၊ ကျွန်တှော့ လိုအပ်ချက်နဲ့လည်း ကိုက်ညီတဲ့ ဟာမျိုး ဖြစ်နေမယ် ဆိုခဲ့ရင် ဟောဒီ ဘလော့ဂ်ကနေ ပြုလုပ်တဲ့သူကို အထူးကျေးဇူးတင်စကား ဆိုပါဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးတွေ လုပ်ပြီးနေတာ ကြာလှပြီ၊ အခု ကျွန်တှောပြောလိုက်မှ ချက်ချင်းကြီး Launch လုပ်ပေးလိုက်တယ် ဆိုရင်တော့လည်း ဘာလို့ ပြီးနေတာကို မထုတ်ပြန်ဘဲ သိမ်းထားရတာလည်းဟင် ဆိုတဲ့ ကိစဿစလေးကိုဖြင့် ကျွန်တှောဆိုရင် အရင်မေးမိမှာခင်ဗျ။ ကဲကဲ ထားပါတော့ အကျဉ်းချုံးလိုက်ရင် အရင်ပိုစ့်မှာ ကျွန်တှော ထင်ထားသလို လုပ်မထားတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ရှိပါတယ်တဲ့။ Publish လုပ်အောင် သူတွန်းအားပေး လိုက်မယ်လို့ တာဝန်ရှိသူဟု ထင်ရသူ တစ်ဦးမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက် ပြောကြားသွားတာမို့ ဒါလေးကို အပ်ဒိတ် လုပ်ရခြင်းပါပဲ။ အရင်ပိုစ့် ရေးချိန်အထိ ပြီးနေပြီဆိုတာ သိကိုမသိဘူး၊ အခုမှ သိတာမို့ အရင်ပိုစ့်လေးကိုတော့ ဒီအတိုင်း ထားလိုက်ပါရစေဦး။ အားအားလျားလျား လာဖတ်ကြတဲ့ စာဖတ်သူ အားလုံးလည်း အရင်ပိုစ့်က အဲဒါနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်လေးတွေကိုသာ မေ့လိုက်ပြီး တို့မြန်မာမှာ ဒါမျိုး ရှိနေပြီ.. ဟားဟားဟားဟား လို့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ မှတ်လိုက်ကြပါတော့လို့ လိပ်တက် Newsလေး ပေးလိုက်ပါရစေ။ (ဒီကောင် ခုတစ်မျိုး တှောကြာ တစ်မျိုးနဲ့ တှောတှော ဗလောင်းဗလဲ နိုင်လှချည်လားလို့ မထင်လိုက်ကြပါနဲ့၊ ခေတ်မကောင်းလို့ ရူးချင်ယောင် ဆောင်လိုက်ရကြောင်းပါဖျာ့) ကောင်းလှောင့်တေး၊ ကောင်းလှောင့်တေး။ အိုရချည်သေးရဲ့၊ နာရချည်သေးရဲ့၊ သုံးရချည်သေးရဲ့။
Related Post : http://nyilynnseck.blogspot.com/2007/11/research-and-resources.html#links
Posted by NLS at 11/11/2007 01:05:00 PM
No response to “Updated News about Myanmar Lexicon and Corpus”